China Alucosun FR fekitari uye bhizimisi | Alucosun
Aluminium Composite Panels (ACP / ACM) zvigadzirwa zvinogadzikana zvinosanganisa hunhu hwesimbi nemapurasitiki anoshanduka-shanduka, icho chigadzirwa chinoshanduka asi chakaomarara pamutengo wakaderera wakakodzera kune akasiyana maficha seFaadade, Roof, Ceiling uye akasiyana akafanana enjiniya ekushandisa kugadziridza kana nyowani chivakwa. Chinhu chinopa mikana isinga gumi yekugadzira hope dzako.
Iko kune akasiyana siyana eAluminium ekumonera zvigadzirwa, Alucosun® inopa kune iyo indasitiri. Chiri chakakurumbira ndeyezvigadzirwa zvinoumbwa ACP / ACM isu tinotaridzika seye yakasimba inokwanisa kugadzira zvigadzirwa zvepasi rose. Kuwedzera kune mhando yezvigadzirwa zvatinopa siginecha yedu kuzvipira kuzvipikirwa zvedu uye nehunyanzvi sevhisi yebasa.
Alucosun ®Aluminium Composite Panel ndiyo yedu yakanaka mharidzo kune yepasirese yekuvaka indasitiri Aluminium Composite mapaneru anoonekwa senge inovaka imwe sarudzo yakati wandei kune Aluminium Panels pane akati wandei maficha anoita kuti ive yakasarudzika.
Alucosun FR®inoedzwa uye inosimbiswa nenyika inozivikanwaLabs. FR Paneli Kirasi A2 uye B (EN13501) Yakasungwa panguva uye PE epaneru mapaneru ari Kirasi A (ASTME84) uye Kirasi 0 uye 1 (BS476Part6, Part7). Pamusoro pezvo, Alucosun FR inosimbiswa kutevedzera NFPA285 uye ASTME-119.
Alucosun® zvinoumbwa zvigadzirwa Chiedza Kurema zvinhu uchienzanisa nes olid esimbi machira, girazi kana mamwe akafanana mafirati anowanikwa mune yemazuva ano mamaki.
Alucosun - FR® mapaneru ane musimboti nekomboni ine zvicherwa zvisingatsve kuti ive nemoto uye chengetedzo muindasitiri.
ACP - FR chinoumbwa nechigadzirwa chinoumbwa neYakawanda chikamu chemaminera asina kuzadzwa emamineral akazara epaneru ayo anosangana nezvinodiwa zveE EN-13501 kuti ishandiswe pasi pechikamu B. Chigadzirwa chakakodzera kushandiswa sekuvhara uye façade yekuvaka dzimba dzekunze dzekunze kana dzekutengesa zvivakwa zvakaderera uye zvakakwirira. simuka. Pamusoro pezvo inoenderana neNFPA-285 uye ASTM E-119 zvinodiwa.
Divi Chikwata Standard Inowanikwa
Upamhi mm 1250, 1500 1000-2000
Kureba mm 3050 Zviuru mazana masere
Ukobvu mm 4 2-6
Aluminium gobvu mm 0.50 0.15-0.70
Zvinotarisirwa Bvunzo Nzira Chikwata Kukosha
Zvivakwa Zvepanyama Ukobvu - mm 4
Yakananga Giravhiti - Makirogiramu / M3 1900
Kurema - Makirogiramu / M2 7.5
Therm. Kufambisa ASTM C 518 W / (mK) 0.45
Therm. Kuwedzera ASTM D 696 X 10-6 / ° C 24
Zvokuimba Tensile Simba ASTM E8 MPA N / mm2 49
2% Hucharatidza Kushushikana ASTM E8 MPA N / mm2 44
Kurasikirwa Kwenzwi Kurasika Kuderedza Ruzha ASTME413 STC 27
MuAluminium Composite Panels Zvigadzirwa zveCore zvinotora basa rakakura mukugadzirisa moto chivakwa. Pasina kupa chero chinhu chayo chakakosha zvimiro zveOcean Panels ACP - A2, ACP-FR zvigadzirwa zvakagadzirirwa kuvhara moto uye kuchengetedzeka tsika pasirese.
Moto Performance Kuenzanisa
Ukobvu 4 4 4
Zvinopisa zvinhu muCore <10% <30% <100%
BS / EU zviyero EN13501-1 (A2 s1 d0) EN13501-1 (B s1 d0) -
Maitiro eUS NFPA 285 (Yakapasa), ASTM E119 (Yakapasa) NFPA 285 (Yakapasa), ASTM E119 (Yakapasa) -
Australia / New Zealand AS / NZS 1530.3 (Hapana kuvesa) AS / NZS 1530.1 (Hapana kuvesa) -
Jerimani En1187 (Yakapfuura) DIN41027 (Yakapfuura) En1187 (Yakapfuura) DIN41027 (Yakapfuura) -
Singapowo EN13501-1 (A2 s1 d0) EN13501-1 (B s1 d0) -
UAE EN13501-1 (A2 s1 d0) NFPA 285 (Yakapasa) EN13501-1 (B s1 d0) NFPA 285 (Yakapasa) -
Colors & Kupedza
Mhando dzakasiyana-siyana dzemavara uye ekupedzisa zvinoita kuti Alucosun ACP ive sarudzo yaunofarira yekuvaka envelopu. Mhando dzakasiyana-siyana, kusimba kwemapendi masisitimu mhando yekupedza, etc. Inoita iyo sutu kune chero kushandiswa kwekuvhara chero chiri chivakwa chebhizimusi, chimiro chechimiro chine yakasarudzika kuzivikanwa kana chiratidzo chakamisikidzwa. Alucosun ACP inopa akasiyana siyana akajairwa uye echinyakare anopedzisa kunze kwe-mukati imba coil yekumhara chivakwa. Alucosun ACP inzvimbo yakapera nePVDF neNANO pendi sisitimu mune inoenderera coil yekumhara maitiro ayo anoona mhando uye kusagadzikana mukuteerera AAMA 2605 kududzirwa.
PVDF pendi sisitimu ine 70% PVDF resin inozivikanwa nekupokana nemwaranzi ye UV uye zvinokanganisa nharaunda saka Alucosun® yakasimba uye inowirirana mashandiro mumamiriro ekunze akaipisisa.
FEVEpendi dzinozivikanwa nekusimba kwazvo. Iwo akanakisa makemikari uye epanyama zvivakwa zvemhando iyi pendi zvakanyatsozivikanwa uye zvichiratidzwa nevashandisi vepasirese nevakagadziri mukati memakore makumi mana apfuura uye ikozvino izvi zvichiri kuenderera zuva rega rega.
NANO- PVDFpendi yekuzvichenesa. Yakadai Paint sisitimu inopa yakawedzera yakajeka yepamusoro jasi ine yakanyanya yakakwenenzverwa NANO zvidimbu pane PVDF kupera; iyo inovimbisa kumeso pamusoro. Yakatsetseka uye yakajeka nzvimbo inoita tsvina uye guruva difcult kunamatira pane izvo zvinopa chivakwa kugara chakachena kutaridzika. PVDF neNANO pendi masisitimu akasimba kwazvo anovimbisa makore gumi nemashanu kusvika gumi nemashanu ekupedza garandi.
ANODZIDZWAmapaneru ane akasiyana sarudzo dzekupedzisa anowanikwa muAlucosun zvisinei zvinoenderana neimwe nguva uye saizi ® kukwana. Inowanzo chengetedzwa neanodized layer mapaneru anogara kwenguva refu akakwenenzvera anopa garandi makore makumi matatu
Pe uye HDPE mapendi anoshandiswa zvakawandisa mune akawanda mashandisirwo nekuda kwenzvimbo dzakakura dzemavara uye hupfumi kufunga, ikozvino garandi makore anogona kuwedzerwa kubva pamakore mashanu kusvika pamakore masere nemhando dzakasiyana dzekupenda.
Kunyangwe echinyakare anoshandiswa eAluminium Composite mapaneru akaputirwa nemadziro uye kushambadzira mashandisiro, mazuva ano ari kushandiswa zvakanyanya munzvimbo dzakasiyana senge kushongedza, kuratidzira, mota senge marori emidziyo, zvitima, ndege, ngarava, fanicha, zvekuvaka nezvimwewo Sezvo ACP iri inochinja zvinhu iyo inogona kushandiswa pamwe chete nekufungidzira kwemugadziri uye dhizaini yekufungidzira zvakasikwa zvakagadzirwa. Misiyano mukushandisa inotikurudzira kutsvaga uye kukudziridza zvisingaenderane magumo ekuwedzera shungu yekupa sarudzo dzisingagumi. Mimwe yekupera kukuru kunowanikwa mune yedu Aluminium zvigadzirwa zviri pazasi, zvisinei hazvina kugumira pano; kana uchigona kufungidzira tinogona kuzvigadzira.
AT ZVEMAHARA - MOPOPERI, ZINC, TITANIUM YAKASIMBA NESIMBA
Pvdf Kupenda Zvivakwa
ALUMINUM PVDF bemhapemha
S. Kwete Parameter Muedzo Webvunzo Mhedzisiro
1 Gloss @ 60 dhigirii ASTM D 523 20-80
2 Kugadzikana (T-bend) ASTM D1737-62 2T, hapana kutsemuka
3 Reverse kukanganisa-kuyambuka NCCA II-5 Hapana chekusarudza
4 Kuoma-penzura ASTM D3363 ≥2H
5 Adhesion ASTM D3359 Hapana chekusarudza
Yakaoma Maitiro 8 Hapana chekusarudza
Wet 37.8 ° C, maawa makumi maviri nemana Hapana chekusarudza
Mvura inobikira 100 ° C, 20 min
6 Paint ukobvu (μm) AAMA2604 25-36 μm zvinoenderana nemachira ekuputira
7 Hasha nemishonga ASTM D968-93 40 l / mamir
8 Chemical Nemishonga ASTM D1308-87 Hapana shanduko
Acid Nemishonga ASTM D1308-87 Hapana shanduko
Alkali Nemishonga ASTM D1308-87 Hapana shanduko
Solvent Nemishonga AAMA 2605-05 Hapana shanduko
9 Mamiriro ekunze-o-mita bvunzo: ASTM D2244-93 Max. Zvikamu zvishanu mushure memakore gumi
Kuchengetedza kwemavara ASTM D523-89 Min 50% mushure memakore gumi
Kuchengeta gloss ASTM D4214-89 Max. Zvikamu zvisere zvemavara & 6
Chalk kuramba Yevachena mushure memakore gumi
10 Munyu pfapfaidzo kuramba ASTM B117-90 Pasa (400hrs X5% NaCl)
11 Humidity kuramba ASTM D2247-94 Hapana mablister Mushure ma4000 hrs, 100% RH, 38 ° C
Yakakurudzirwa Nzira Yekuchenesa
Kureba uye hunhu hwekusuka kwechivakwa kunoenderana nezvinhu kana sisitimu, nzvimbo yayo nenzvimbo mukati mechivako, uye mwero wekuchenesa unodikanwa. Kugara kwakajairika ibasa rinowanzo zivikanwa sezviri madikanwa kuti riwane kusimba kunotarisirwa.
Namatira kune vagadziri kana vanotengesa mazano ekuchengetedza Panguva yekuchenesa, ll yekushandisa michina senge manera, staging, mobile scaffold, vanotora macherry kana zvimwewo, zvinofanirwa kugadzirirwa nemapedhi kudzivirira mapaneru kubva mukukanganisa. Kuchenesa zvisirizvo kunoguma nekukuvara kwekuputira hakufanirwe kuvharwa nemitemo uye mamiriro echigadzirwa chechigadzirwa.
Usashandise yakasimba solvents.
Usashandise alkali yakasimba, yakasimba asidi kana hasha inoshambidza. Kana aya solvents uye ma cleaners akashandiswa, pendi inogona kuzvimba, kuputika kana kutsemuka.
Usashandise yakakwira-kumanikidza mvura kuchenesa sezvo izvi zvinogona kukonzera kukuvara kwejoini sealant kana kukonzera pendi kubviswa. Kubhowa kwemvura hakukurudzirwe.
Usasanganidze akasiyana machenesa. Kana vanochenesa vachida kusanganiswa, maasea anoteedzera rairo dzekugadzira.
Dzivisa kwakanyanya tembiricha kuchenesa zvemapuranga pamusoro. Nzvimbo dzinodziya zuva (pamusoro pemakumi mana ℃) dzinogona kukwirisa kuita kwemakemikari uye dzinogona kupfumisa mvura kubva mukugadzirisa ichisiya masara nematavi. Pane kupesana, tembiricha yakaderera zvakanyanya inogona kupa zvakashata kuchenesa mhedzisiro.
Alucosun ®chiitiko cheWisdom Metal Composites Ltd icho chinounza zvigadzirwa zvemberi mukubatana pamwe neyedu inozivikanwa yekugadzira nzvimbo iri kuJiangsu, iine makore angangosvika makumi maviri ezviitiko zvakapfuma muAluminium Panel Indasitiri. Alucosun a®brand iyo inokoshesa zvese zvako zvekuvaka paneli zvinoda, Yakashongedzerwa nezvose zviri-mumba zvivakwa kuti uve nechokwadi chehunhu chigadzirwa uye nekutumira kuzvipira. Isu tinopa zvigadzirwa zvakanakisa nemhedziso kukwana; inowanikwa neyakaenzana musanganiswa wevashandi veindasitiri, tekinoroji yazvino uye michina yemhando yepamusoro. Yakagadzwa nzvimbo yekugadzira inopfuura 10Million M2 pagore, iine matatu (3) zvirimwa zvePanera Kugadzira, Ruvara Kuputira pamwe neakashongedzerwa In-imba Laboratory uye Warehouse.
Alucosun®inoshanda muFar East, Middle East, Latin America, Europe neAmerica. Mahofisi edu ematunhu, vatengesi, vamiririri nevashambadzi mudunhu rese vanotigonesa kuzadzisa zvido zvako zvezvivakwa zvekuvakisa nemasevhisi ekutsigira chero kwaunenge uchida.
Pashure: Alucosun FR A2
Zvadaro: Alucosun PE